Mogadishu Journal » Beesha Murusade oo usoo Sharaxatay Aqooyahan Caan ah Jagada Ra’isul wasaaraha Soomaaliya
Maanta kulan aad u balaaran oo ay Beesha Murusade ku yeelatay magaalada Muqdisho, kulankaas oo ay kasoo qeyb galeen dhammaan siyaasiyiinta, saraakiisha , aqoonyahanada , ganacsatada, dhalinyarada iyo culimaa udiinka beesha Murusade ay u soo sharaxdeen aqoonyahano uu ka mid yahay aqoon yahan caan ka ah wadanka gudihiisa iyo dibeddiisa, Mahdi Ali Xeyle in uu jagada Ra’isulwasaaraha cusub loo magacaabo. Kulankaas oo ahaa mid ay beesha ugu hadleysay aqoonyahanada beesha kuwooda u qalma Jagadaas inuu qabto. Kulankaas oo eey beesha Murusade isugu timid ayaa ahaa kulan albaabada uxirnaa muddo 6 saacadood ah.
Muddadii uu kulankaas socday ayaa waxaa aad loogu hadlay sidii ay beesha murusade ugu qaadan lahayd door muhiim ah ayna u sameeyn lahayd wada shaqeeyn weyn, oo dhexmarta iyaga iyo Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, iyadoo oo ay ka dalbadeen Madaxweynaha cusub in uu ka aqbalo musharaxa ay beesha Murusade isku raacaan inuu qabto Jagada Ra’isulwasaaraha cusub Soomaaliya ee uu wadanka yeelanayo waqtiga dhow. Waxeey odyaashu sheegeen ineey musharaxa ka fiiriyeen xaga aqoontiisa , kartidiisa iyo diintiisaba. Wadahdal dheer ka dib waxeey beeshu isku raacday in eey u doortaan xilka Raiisuk wasaaraha Aqoonyahnkaan aan kor ku xusnay oo magciisa la yiraahdo Mahdi M Cali Xeyle, oo ah aqoonyahan waxbadan ka soo shaqeeyay arimaha bulshada iyo siyaasada. Aqoonyahan leh aqoonta maadiga ah iyo dan diintaba. Musharaxu Waxuu kamid ahaa dhalinyardii u istaagtay waxqabadka iyo difaacida Soomaalidii ku soo qulquleeysay dalka Marayka gaar ahaan Magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis, /Saint Paul Minnesota. Waxuu ka caawi jiray jaaliyadda Soomaaliyeed dib udajinta qaxootiga, Sharciyad immigrationka, difaacida xqquqda dadka Soomaalida ah iyo isku dubariddida arimaha doorashooyinka ee loo yaqaan (Community orgonizing). waxuu Agaasimi iyo Madaxweynaba ka ahaa urukii (Center For Soamli Solutions Of Minnesoto) oo wax badan u qabtay umada Soomaaliyeed oo ku nool Minnesota. Musharaxu waa qoraa ka faallooda arimaha bulshada, siyaasda iyo caalamka Islaamka. waxuu wax ku qoraa luqada Af Ingariiska iyo Somaaliga. Waxaa qoraalkiisa ka dheehan kartaa barta uu wax ku qoro oo (www.opednews.com/author/author71014.html) Musharaxa jagada Raiisul wasaaraha taas waxaa u dheer inuu ahaa madaxii Hay’adda MSF Spain oo joogtay degmada Aadan Yabaal Madaxii waaxda qaxootiga Hayada MSF ee dadaab, Kenya iyo gobolka Shabellaha Dhexe muddadii 1992 – 1995. Waxuu kaloo ka soo shaqeeyay Hayadii u qaabil saneed Jimciyada qaruumaha u dhaxeeysa nab ilaalint ee la oran jiray UNISOM sandkii 1992..
Mahdi Xeyle waxaa uu ku dhashay Gobolka Hiraan , degmada Buulo Burte , halkaas oo uu waxabarashadiisa dugsiga hoose/dhexe iyo sare kaga qalin jebiyey degmada Buulo Burte. Aqoonyahan Mahdi Xeyle waxaa uu ahaa arday dhigta Jaamicada Lafoole markii uu qarxay dagaalkii sokeeye, kadibna waxuu u guuray wadanka Marayknaka halkaas oo uu ku qaatay shaadooyinka qaatay BA iyo Masters in Political sciance and Masters of community development policy and Paractice) Mahdi waa u sharaxane heerka Musharaxa shahaadad ugu sareeysa ee PHD Candidate. Dadbanda waxeey ku yaqaanaan Mahdi Aqoontiisi, Kartidiisa iyo Diintisa iyo wadaniyadiisa aan la gambadka laheeyn.